LABAD GUDOOMIYEY OO DALKA KA DHOOFAY XILI KHILAAF SIYAASADEED KA JIRO DALKA | Toggaherer's Weblog
Labada hogaamiye ee xisbiyada mucaaridka ah Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo Eng. Faysal Cali-waraabe ayaa dalka debeda uga baxay iyadoo ay weli taaganyihiin duruufihii muranka siyaasadeed ee ka dhashay dib-u-dhaca doorashada madaxtooyada Somaliland.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID Faysal Cali-waraabe ayaa isagu hore dalka uga dhoofey, isagoo haatan ku sugan dalka Imaaraadka Carabta, halka Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Axmed Siilaanyo lagu wado in uu maanta dalka ka amba-baxo, isagoo u kucitimaya dalka Ingiriska, mana jiro war rasmiya oo ka soo baxay labada xisbi-mucaarid oo ku saabsan socdaalka guddoomiyayaasha oo ku soo beegmay xilli aan si rasmi ah xal looga gaahdin murranka siyaasadeed ee dalka hadheeyey.
Maqnaanshaha labada guddoomiye-mucaarid ayaa u muuqata mid sii wiiqaya xal rasmiya oo laga gaadho khilaafaadka siyaasadeed, maadaama talada xisbiyada mucaaridku badanaa ka go’do guddoomiyaasha oo keliya, inta ay maqanyihiina aan la filayn furdaaminta duufaanada muranka siyaasadeed ee u dhexeeya iyaga iyo xukuumadda xilka haysa.
Tegitaanka labada guddoomiye-mucaarid ayaa dadka siyaasada falanqeeyaa waxa ay sal uga dhigayaan hungo iyo guul-darroi siyaasadeed oo ay kala kulmeen loollankii siyaasadeed ee u dhexeeyey madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, kuna hungoobey ka midho-dhallinta damacoodii siyaasadeed ee ay hamiyayeen in at talada dalka qabtaan oo doorashaduna dhacdo wakhti ka horeeya kan immika Guurtida iyo Komiishanku asteeyeen.
Bixitaankooduna waxa uu ka danbeeyey maalin ka dib markii labada xisbi ay si wada jir ah u soo saareen war-saxaafadeed ay ku dhaleecaynayaan xukuumadda, gaar ahaana madaxweyne Rayaale, iyagoo ku sifeeyey saxeex la’aantii madaxweynaha ee qoddobadii guddida dhexdhexaadintu ka soo saareen khilaafaadka siyaasiga ah heshiis la’aan, taas oo macnaheedu noqonayo in aanu jirin wax heshiis ah oo lagu so oaf-jaray khilaafaadkaas.Waheen